Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada Gobolka Banaadir oo kulan yeeshay | Somchess.net
You are here : Somchess.net » wararka » Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada Gobolka Banaadir oo kulan yeeshay
Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsiyada Gobolka Banaadir oo kulan yeeshay
Posted On Monday, November 7, 2011 By admin. Under wararka
Xarunta ururka Midowga ardayda ee magaalada Muqdisho waxaa maanta kulan ballaaran ku yeeshay Guddoomiyaha Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya iyo macallimiinta shan dugsi oo ku yaala Gobolka Banaadir, kulankaasi oo looga hadlayay diyaar garowga tartanka ciyaarta Shataranjiga ee ardayda dhigata dugsigaasi.
Kulanka waxaa kale oo looga hadlay tayada ardayda baratay ciyaarta Shataranjiga khibradda iyo aqoontooda heerka ay gaarsiisan tahay, iyadoo macallimiinta dugsiyada Guddoomiyaha xiriirka Shataranjiga Soomaaliyeed Md. Axmed Cabdi Xasan (Wataac) ay uga warbixiyeen ardaydii iyagu baranayay ciyaarta Shataranjiga.
Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Shataranjiga Axmed Cabdi Xasan ayaa ku ammaanay macallimiinta dugsiyada xiriirkiisu la leeyahay wada shaqeynta doorkooda ku aadan barashada ciyaarta Shataranjiga, wuxuuna Guddoomiye Wataac u ballanqaaday ardayda dugsiyada gobolka Banaadir ee aan fursadda u helin barashada ciyaarta Shataranjiga inuu gacan ku siinayo sidii ay u baran lahaayeen ciyaarta Shataranjiga.
Macallim Carabow oo ka mid ah macallimiinta dugsiga Hoyga Xamar ayaa sheegay in ardayda dhigata casharada Shataranjiga ay iyagu ka qeyb qaadan karaan tartanka ciyaarta shataranjiga ee dhowaan ka dhacaya magaalada Muqdisho.
Wuxuu sheegay inay jiraan arday kale oo soo codsaday inay bartaan ciyaarta Shataranjiga, wuxuuna Xiriirka Shataranjiga Soomaaliya ka codsaday inuu ku gacan siiyo sidii ardaydaasi ugu biiri lahaayeen bahda Shataranjiga.
Dhinaca kale Guddoomiye Axmed Cabdi Xasan (Wataac) ayaa macallimiinta dugsiyada ee uu maanta la kulmay waxa uu u sharxay qaabka uu u dhici doono tartanka ciyaarta Shataranjiga oo ay ka qeyb qaadanayaan wiilal iyo gabdho, kaasi oo loo qabanayo dhammaanba ardayda ciyaarta Shataranjiga baratay.
« Somali schools get sports lift through chess boards
Ururka SYL2 oo arday u furay tababarka ciyaarta Shataranjiga + Sawirro »